स्थानीय तहका निराशाजनक शैक्षिक अभ्यासहरु | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ आश्विन १२, सोमबार ०८:३८ गते
२०७२ भन्दा पहिला शिक्षामा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय निकायसम्म पु¥याउने नारा लिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेर शैक्षिक व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गरेको छ । विगतमा लामो समय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन हुनुले पनि शिक्षामा स्वामित्व लिने, जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति र संस्थाको अभाव थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, समुदायले अभिभावकत्व गर्ने नेतृत्व पनि प्राप्त गरेको छ । केही स्थानीय तहहरुले विगतमा केन्द्रले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि गर्न नसकिएका कार्यहरुमा आप्mनो क्षेत्रमा सजिलै सफलता प्राप्त गरेका छन् । अवसर पाउँदा पनि केही स्थानीय तहका शैक्षिक अभ्यासले भने सुधारभन्दा पनि निराशाजनक परिणाम ल्याउने निश्चित भएको छ । यस लेखमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका नकारात्मक परिणाम आउने खालका कार्यहरुको चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको गठन नहुँदासम्म शिक्षक नियुक्तिमा प्रणाली स्थापित हुन सकेन । योग्य व्यक्तिहरु शिक्षक हुन चाहँदाचाहँदै पनि शिक्षक हुन पाएनन्, कामको खोजीमा अन्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने बाध्यता भयो । विद्यालय शिक्षामा कमसल खालका व्यक्तिहरु पनि भित्रिए । त्यो भित्रिएको समूह अझै १०/१५ वर्ष रहने छ । योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न सकेमा र मेहनती, इमानदार शिक्षकलाई काममा उत्प्रेरित गर्न सकेमा मात्र विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउन सम्भव हुन्छ । केही स्थानीय तहहरुले राम्रा, योग्य व्यक्तिलाई कसरी भिœयाउनेभन्दा आफ्ना दलका समर्थकहरुलाई कसरी रोजगारी दिने ? आफ्ना मतदातालाई नजिकमा कसरी सरूवा गर्ने ? कसरी आफ्नो पछाडि लाग्ने शिक्षकलाई थप सुविधा दिने ? भन्नेतर्फ लागेको र विगतमा भएका गलत अभ्यासलाई अनुसरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
विद्यार्थी संख्या र दरबन्दीको तुलनात्मक अध्ययन गरी आवश्यक विद्यालय र विषयमा मात्र शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यार्थी संख्या घटेर शून्यतर्फ जाँदै गरेका, शिक्षक धेरै भएका तथा शिक्षक चाहिँदै नचाहिने विद्यालयमा समेत पालिकाको बजेटमा आफ्ना कार्यकर्र्तालाई शिक्षकका रुपमा नियुक्ति गरेको पाइन्छ । अध्यापन अनुमतिपत्र भएका व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि अनुमतिपत्र नभएकालाई नियुक्ति गर्ने, करार तथा अस्थायीरुपमा कार्यरत भएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ४० अंक पनि ल्याउन नसकेर सुविधा लिएर अवकाश लिइसकेका व्यक्तिहरुलाई पुनः विभिन्न तरिकाले शिक्षकमा नियुक्ति गर्ने गरेको पनि भेटियो । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी पठाइएका शिक्षकलाई उत्तीर्ण गर्न नसकेका शिक्षकको रुपमा आफूले राखेका कार्यकर्ता हट्छन् भनेर हाजिर नगराउने, आयोगबाट स्थायी भएर आएका व्यक्तिलाई टाढा पठाउने, हीनताबोध गराउने, राम्रा शिक्षकलाई अन्यत्र सरूवा गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नेजस्ता कार्य गरेको देखियो । रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षिक नियुक्तिका लागि लिइने परीक्षाहरु देखाउनका लागिमात्र गर्ने, आफ्नोलाई सेटिङ मिलाएर नियुक्ति गर्ने, एउटा विद्यालयका लागि छानिएको करार शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा, अन्तरपालिकामा सरूवा गर्ने गरेको पनि पाइयो । अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्न न आफ्नो ऐन, नियम न पुरानो शिक्षा ऐन नियम, आफ्नै मनोमानी नियुक्ति गर्नेजस्ता अभ्यासले पक्कै पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुँदैन, शिक्षा सुध्रँदैन ।
भौतिक सुधार तथा विद्यालय भवन, शौचालय, फर्निचर निर्माण गर्दा विद्यार्थी संख्या हेरेर, आवश्यक भएको विद्यालयका लागिमात्रै निर्माणका कार्यका निम्ति बजेट छुट्टयाउनुपर्नेमा, विद्यार्थी कम हुँदै गएका र आवश्यकता नै नभएका विद्यालयहरुलाई पनि भौतिक निर्माणमा बजेट छुट्टयाउने र नाममात्रको भौतिक सुधार गरी बजेट निजी शिक्षक तलबमा खर्च गर्ने अभ्यास पनि केही पालिकाले गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारबाट विद्यालयलाई वितरण गर्न ससर्त अनुदानको रुपमा छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, नमुना विद्यालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि प्राप्त रकमसमेत विद्यालयमा निकासा दिन ढिला गर्ने, नदिने, भौतिक निर्माणको बजेटबाट पाँच प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी कटाउने, कमिसन खोज्नेजस्ता कार्य पनि गरेको पाइयो । विद्यालयमा निकासा गरिएको रकम कुन शीर्षकमा के कार्यका लागि निकासा गरिएको हो ? कसरी खर्च गर्ने हो ? विद्यालयलाई जानकारी हुनुपर्दछ । त्यसका लागि विगतमा केही जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निकासा पत्र दिने गर्दथे भने केहीले आफ्नो प्रकाशनमार्फत बजेट र खर्च गर्ने प्रक्रिया जानकारी गराउँथे । पालिकाले थोरै विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले निकासा पत्र दिन र गएको बजेटको केकसरी खर्च भयो भन्नेबारेमा अनुगमन गर्न सम्भव छ । निकासा दिएको रकमको विवरण र खर्च गर्ने प्रक्रियासहितको पत्र नदिएमा विद्यालयलाई खर्च गर्न अन्योलता हुन्छ । कुन विद्यालयमा कुन शीर्षकमा कति बजेट निकासा भयो भन्नेसमेत अभिलेख चुस्तदुरूस्त राख्ने र निकासा भएको बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको पनि धेरै पालिकामा भेटिएन ।
प्राविधिक विषयको लहर चलेको छ । गरिखाने शिक्षा दिन प्राविधिक विषयको आवश्यकता पनि छ । संघीय सरकारबाट प्राविधिक विषयका लागि ठूलो आकारको बजेट विद्यालयमा जाने हुनाले पनि विद्यालयहरु प्राविधिक विषय सञ्चालन गर्न आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो । स्थानीय तहले प्राविधिक विषय सञ्चालनको अनुमति दिँदा आप्mनो पालिकाभित्र कुन–कुन प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय सञ्चालनमा छन् ? कुन विषयको आवश्यकता छ ? आप्mनो क्षेत्रका लागि कस्तो विषयको सम्भावना बढी छ ? युवाहरु कुन विषय पढ्न चाहन्छन् ? कुन विद्यालयमा कुन विषय आवश्यक छ ? जस्ता कुराहरु यकिन गरेर, योजना र दीर्घकालीन सोच बनाएर विद्यालयलाई प्राविधिक विषय सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्नेमा पालिकाहरुले विद्यालय अनुमति माग्न आयो हामीले दियौँ भन्ने गरेको र बिनासम्भाव्यता अध्ययन र बिनायोजना प्राविधिक विषय सञ्चालनको अनुमति दिने गर्नाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय नाममात्रको हुने वास्तविक प्राविधिक तथा व्यावसायिक हुन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । विद्यालय खोल्दा, कक्षा तथा तह थप गर्दा र समायोजन गर्दा पनि नक्साङ्कनको आधारमा गरिनुपर्नेमा विद्यालयले मागेकै आधारमा कक्षा थप तथा तह थपको अनुमति दिने गरेको पनि भेटियो ।
हरेक आर्थिक वर्षको सुरूमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाएको बजेट, बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियासमेतको सरोकारवालाहरुमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । बजेट जति सार्वजनिक तथा पारदर्शी गर्न सक्यो त्यति दुरूपयोगको सम्भावना घट्छ । निकै कम पालिकाले मात्र बजेटको अभिमुखीकरण गर्ने गरेको पाइयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विद्यालयका जग्गा र सम्पत्तिहरुको संरक्षण गर्ने, सदुपायोग गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ । मधेसतिरका धेरै विद्यालयहरु बिघौँबिघा जमिन भएका पनि छन्, सहरी क्षेत्रमा भएका विद्यालयहरुमा सटर तथा जमिन भाडाबाट पनि पर्याप्त आम्दानी हुन्छ । विगतदेखि नै विद्यालयका जग्गा ठेक्का लगाउँदा, सटर जमिनहरु भाडामा दिँदा धेरै दुरूपयोग हुने गरेका छन् । स्थानीय तहले र जनप्रतिनिधिहरुले चाहने हो भने त्यस्ता विकृति र दुरूपयोग रोक्न सक्ने सम्भावना छ । तर, त्यतातिरभन्दा कतिपय पालिका तथा जनप्रतिनिधिहरुले आफैँ विद्यालयको जग्गा भाडामा लिने, सम्पत्तिमा गलत दृष्टि लगाउने गरेको पनि देखिन्छ ।
वडा समिति भनेको वडा सरकारजस्तै हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले वडा समिति र वडा अध्यक्षलाई तोकेका कार्यहरु गरी भ्याउन नसकिने खालका छन् । केही पालिकाहरुले वडा अध्यक्षलाई वडामा भएका सबै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बन्ने नियम बनाएको देखिन्छ । विद्यालयका विभिन्न निर्णय गर्न पटकपटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा वडा अध्यक्षले समय दिन नसकेर बैठक बस्न नसकेको पनि देखियो । विगतमा भन्दा बसाइसराइँ तथा जनसंख्या वितरणमा परिवर्तन आउनाले धेरै विद्यालय विद्यार्थीविहीन भएका छन् र कुनै विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएको अवस्था पनि देखिन्छ । साधनस्रोतको दुरूपयोग रोक्न नजिकका विद्यालयहरु समायोजन गर्नु आवश्यक छ । धेरै पालिकाहरुले यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । विद्यालय समायोजना गर्दा मतदाताहरु बिच्किन्छन् भनेर विद्यार्थी शून्य भए पनि सामायोजन गर्न हुँदैन भनेको पनि भेटियो ।
विगतमा समस्या र विकृति भएको कारणले नै प्रणालीमा सुधार ल्याउनु परेको हो । केन्द्रले देशका कुनाकाप्चामा समान ध्यान पु¥याउन सकेन । नजिकबाट सानो क्षेत्रमा राम्रो ध्यान पुग्न सक्दछ, सुशासन कायम हुन सक्दछ भनेर नै स्थानीय तहलाई संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार सुम्पिएको हो । विगतमा कर्मचारीले जस्तो गरेका थिए निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि त्यस्तै गर्ने, विकृतिको अन्त गर्नुभन्दा झनै थप्ने, नयाँ सोचका साथ स्थापना भएका जनप्रतिनिधिका संस्थाहरुले पुरानै तरिकाले कार्य गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको सुधार कसरी सम्भव होला ? हाम्रा नयाँ पुस्ताले कसरी गुणस्तरीय तथा गरिखाने शिक्षा पाउन सक्लान् ? यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानु जरूरी छ ।